China Customized Steel Formwork ifektri nabaphakeli |I-Lianggong
I-Custom Steel Formwork
Insimbi eyenziwe ngokwezifiso yakhiwe ngepuleti lobuso bensimbi elinezimbambo ezakhelwe ngaphakathi nama-flange kumamojula avamile.Ama-flange abhoboze izimbobo ngezikhathi ezithile ukuze kuhlanganiswe i-clamp.
Insimbi eyenziwe ngokwezifiso iqinile futhi ihlala isikhathi eside, ngakho-ke ingasetshenziswa kabusha izikhathi eziningi ekwakheni.Kulula ukuhlanganisa nokubeka.Ngomumo nokwakheka okungaguquki, kufaneleka ngokwedlulele ukufaka isicelo esakhiweni okudingeka kuso inani elikhulu lesakhiwo esimise okufanayo, isb. Isakhiwo esiphakeme kakhulu, umgwaqo, ibhuloho njll.
I-formwork yensimbi yangokwezifiso ingenziwa ngokwezifiso ngesikhathi ngokuya ngezidingo zamakhasimende.
Ngenxa yamandla aphezulu okwakheka kwensimbi yangokwezifiso, umsebenzi wensimbi wangokwezifiso unokuphinda usetshenziswe okuphezulu.
I-formwork yensimbi ingasindisa izindleko futhi ilethe izinzuzo zemvelo ohlelweni lokwakha.
Ukudala i-formwork yensimbi kudinga inqubo encane yokukhiqiza.Ziningi izindlela zokwenza insimbi, enye yazo ukumodela ngekhompyutha.Inqubo ye-digital modeling iqinisekisa ukuthi insimbi yakhiwe ngendlela efanele ngesikhathi sokuqala futhi yakhiwe, ngaleyo ndlela inciphisa isidingo sokusebenza kabusha.Uma i-formwork yensimbi ingenziwa ngokushesha, ijubane lomsebenzi wensimu nalo lizosheshisa.
Ngenxa yamandla ayo, insimbi ifaneleka ezindaweni ezibucayi nezimo zezulu ezinzima.Ukusebenza kwayo kwe-anti-corrosion kunciphisa amathuba ezingozi kubakhi bezakhiwo nezakhamuzi, ngaleyo ndlela kunikeze indawo ephephile yawo wonke umuntu.
Uma kucatshangelwa ukusebenziseka kabusha nokuphinda kusetshenziswe kabusha kwensimbi, kungathathwa njengento yokwakha esimeme.Ngakho-ke, izinkampani eziningi ziyanda zenza ukukhetha okusimeme ukuze kuncishiswe ukulimala kwemvelo.
I-Formwork iyisakhiwo sesikhashana lapho ukhonkolo ungathelwa futhi uqiniswe ngenkathi uhlala.I-formwork yensimbi ihlanganisa amapuleti ensimbi amakhulu avikelwe kanye nemigoqo namabhangqwana aziwa ngokuthi amanga.
I-Lianggong inamakhasimende amaningi emhlabeni jikelele, sinikeze uhlelo lwethu lwe-formwork eMpumalanga Ephakathi, eNingizimu-mpumalanga ye-Asia, eYurophu njll.
Amakhasimende ethu abelokhu ethemba i-Lianggong futhi ebambisana nathi ukuze afune intuthuko efanayo.
* Akukho ukuhlanganisa, ukusebenza okulula nge-formwork eyakhiwe.
* Ukuqina okuphezulu, yenza isimo esihle sokhonkolo.
* Ibanga elisetshenziswa kabanzi, njengebhilidi, ibhuloho, umhubhe, njll.
Shear izindonga, ama-metro, ama-slabs, amakholomu, izakhiwo zokuhlala nezohwebo.
Okwedlule: Plastic Slab Formwork
Olandelayo: Cantilever Climbing Formwork